Shiinaha Soosaarayaasha saarayaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha | P&Q
P & Q-leedahay warshad lagu shubay dhinta ayaa ku taal Haining, Zhejiang, Shiinaha.
Waxaan nahay ISO 9001: 2015 shahaado bixiya aluminium dhinta shahaado aqoonsan oo ku takhasusay adeegyada kabka dhinta ee warshadaha iyo shirkadaha adduunka hogaaminaya.
Mashiinka shubka dhinta ee 200 tan ~ 800ton. Waxaan si isdaba joog ah u maalgashannaa qalabka cusub si aan si guul leh ugu wajahno caqabadda horusocodka joogtada ah mar walbana waxaan siino xalka ugu habboon ee baahi kasta oo macaamiisheena ah.
Waxaan ku takhasusay dufcadaha yaryar-dhexdhexaadka ah mahadnaqa qalabkeena khibrada isbedelka degdega ah. Waxaan ku siin karnaa xalal daboolaya baahiyahaaga dabacsan. Awoodda dhalaalida ilaa 2000 Kg / h. Dhib malahan inaad lashaqeyso alloysyo kaladuwan isla waqtigaas.
P&Q waxay maamushaa dhammaan silsiladda qiimaha wax soo saar leh taas oo noo oggolaaneysa inaan u siino macaamiisheenna qaybo dhammaystiran oo dhammaystiran, diyaarna u ah in lagu daro sheyga ugu dambeeya.
Laga soo bilaabo 2005 P&Q waxay isku daraysaa aaladaha wax soo saarka caatada iyo falsafada si loo gaaro horumar joogto ah oo ku saabsan geedi socodka iyo natiijooyinka.
Faa'iidooyinka Dhimashada Dhimashada
Dareemida Die waxay soo saari kartaa qaybo bir ah oo qaabab isku dhafan leh oo sidaas sameeya iyada oo loo dulqaadanaayo marka loo eego habab badan oo wax soo saar badan.
Wax soosaarka dhinta gaar ahaan heerarka waxsoosaarka sareeya, oo leh qaybo ubaahan makiinad yar ama aan lahayn.
Natiijooyinka tuurista dhinta qaybo waara, qaab ahaan deggan, oo mashruuc ka dhiga dareenka iyo muuqaalka tayada.
Qaybaha dhintay ayaa ka xoog badan kuwa wax lagu duro ee balaastigga ah, oo bixiya saxsanaanta cabir isku mid ah. Tuurista gidaarku way ka xoog badan yihiin kana fudud yihiin kuwa suurtogalka ah hababka kale ee loo shubay.
Dajinta dhinta waxay ka kooban tahay saxnaan sare iyo taranka soo noqnoqda ee nashqadaha isku murugsanaanta iyo heerka faahfaahinta.
Guud ahaan, dhimashadu waxay keentaa qiimo dhimis ka timid hal geeddi-socod oo ka soo horjeedda geeddi-socod u baahan dhowr tallaabo oo wax soo saar oo kala duwan. Waxay sidoo kale badbaadin kartaa lacag iyadoo la yareeyo walxaha qashinka ah iyo duugga.
Dajinta Die-ka badanaa waxay keentaa heerar wax soo saar dhaqso ah ama xawaare.
Hore: Iftiinka Wadada LED-PQSL003
Xiga: Cirbadda caagga ah